Monday May 25, 2020 - 03:59:02 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Aadan madoobe oo kaashanaya xildhibaano kale oo ay kamidka yihiin
2 Max'ud m yaxiye
3 Yacaqub Maxamed
5 malaaq dhaayow iwm
6 Sandheere Mad Iftiin
ayaa caawa la kulmey ayagoo gelbinaya Laftagreen, waxaana markii guriga ay galayeen ay goobtaasi xaadir ku aheyd Xildhibaan xaniifo Xaabsade oo dhulka ku jiidey Laftagreen oo ay diidey iney salaanto kadibna iskaga soo baxdey
Mohamed Mursal markii soo jeedinta gudiga uu dhageystey kadib wuxuu ku eedeeyey in lafta gareen weji kaama rabo la yacaarey hadana aan waxba uga baahneyn oo la is arki doono xiliga doorashada..
Eedemihii laftagreen loo jeediyey ayaa qirey in warka uu mursal ku eedeeyey laftagreen dhamaan sax yaahy laakiin uu hada bixinayo Raali gareyn iyo ka xumaasho.
Waxaa ugu dambeyn hadalkii qaatey Xildhibaan afaraale oo ku dhahay laftageen laguma aamini karo ayaa lagu wada buuqey oo la dhahay balaayo ha afuufun ee aamus heshiis ayaan u imaaney meeshaan.
Waxaa la isku afgartey in habeen dambe mar kale la isku imaado Mohamed Mursalna uu keeno xildhibaanda eeda tabanaya ee ku kooxda ah Mohamed Mursal sida Xildhibaan Jawaahir, Xaniifo iyo kuwo kaloo badan.
Intaan goobta laga dhaqaaqina yaa laftagareen waxaa soo wacey Hassan Ali Kheyre oo laftagareen sameecada ufurey kuna dhahay raiisul wsaare caawa waan faraxsanahay waxan la joogaa gudoomiyaheyga waana heshiiney!
Hadaba ujeedka ugu weyn ee laga leeyahayy Mursal iyo kooxdiisa ayaa ah in sawir lala galo kadib farmaajo waxaa u cadaaneysa in mursal iyo kooxdiisa ay daciif yihiin oo markii loo baahdo lasoo wareejisan karo waa talaabo KU TIJAABIN AH.
Guntii iyo gaba gabadii maxaa dan ah oo ugu jirta JAAMAC in Arinkaan uu ka shaqeeyo?